Dagaalka siyaasadeed ee ka dhex bilowday Wadamada Khaliijka Saamayn intee le’eg ayuu ku yeelan karaa dowladda Soomaaliya? – Balcad.com Teyteyleey
Dagaalka siyaasadeed ee ka dhex bilowday Wadamada Khaliijka Saamayn intee le’eg ayuu ku yeelan karaa dowladda Soomaaliya?
By Maxamed Axmed Xasan	 On Jun 6, 2017
Khilaafka ka dhex taagan wadadama Khaliijka ayaa cirka isku shareeray, Sacuudi, Masar, UAE, Bahrain, Yeman iyo Liibiya ayaa xiriirkii u jaray dalka Qadar, xataa wadamadaas waxay diideen in ay soo dulmaraan diyaaradaha Qadar laga leeyahay, waxaan la xiray dhamaan xuduudaha dhanka badda iyo bariga ee ka dhaxaysa Qadar iyo dalalkaas, waxayna ku amreen in muwaadiniintooda uga baxaa mudo 14 cisho ah.
Su’aasha isweydiinta u baahan waxaa weeyey talaabo noocee ah ayeey qaadanaysaa Dowladda Soomaaliya? waxaa jiri kara in cadaadis uga yimaado dalalka khaliijka……Suurtagal ma tahay in ay sidii Sweden kalhore loo cambaareeyey iyadoo la fiirinaya danta Sacuudiga?….. ..Suurta gal ma tahay sidii Iraan bilaal sabab la’aan ay dowladii hore xiriirka ugu jartay iyadoo fiirinaysay danta Sacuudiga….Suurta gal ma tahay in ay mooqif aan u jeedo lahayn laga qaato sidii dhacday 2014 markii dowladda Soomaaliya ay Ruushka ku cambaaraysay dagaalkaii Caramia ee u dhaxeeyey Ukrain iyo Falaagadii Ruuskha taageerayey iyadoo fiirinaysa danta Maraykanka,….Dowlada Soomaaliya ma qaadanaysa talaabooyin qar iska tuurnimo ah sidii dhacday xiliyadaas aan kor ku soo xusay. Maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya si ay arinkaan uga istaagto mowqif adaga madaama uu saamayn ku yeelanayo?
Waa dood furan qof walba ra’yigaaga ka soo dhiibo inta aan xeero iyo fandhaal kala dhiicin.
Shirkadda Diyaaraha Qatar Airways ayaa dhowrkii saacadood ee la soo dhaafday ku socdaashay Hawadda Soomaaliya, kadib markii Sacuudiga uu sheegay in Hawadoodda aysan isticmaali karin Diyaaraha laga lee yahay dalka Qatar.
Sarkaal ka tirsan Waaxda Duulimaadka Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 15 dulimaad ay ku sameysay Hawadda Soomaaliya Shirkadda Qatar Airways.
Hase’ahaaate Waxaa soo Baxaya warar sheegaya in cadaadis lagu saarayo DFS in ay xiriirka ay u jarto Dowladda Qatar.
Cali jeyte Cismaan “Puntland… Raga Ay Qaraxa Ku Qabatay Al’Shabaab Ma’aha, ee Yey Dilin…”